Menaka manitra vaovao hitsena lohataona | Bezzia
Menaka manitra vaovao hitsena ny lohataona
Bezzia | | ditin-kazo manitra
Eo akaiky eo fotsiny ny lohataona ary miaraka aminy ny andro mafana ary manomboka ny akanjo miloko sy mahafinaritra indrindra. Fa izao koa ny fotoana hijerena ny vaovao Menaka manitra an'ny vehivavy izay manamarika azy ireo dia mandeha eny an-tsena ary mampipoitra izany fahasambarana mampiavaka izany amin'izao vanim-potoana izao. Ny fofona voninkazo sy voankazo dia matetika no mahazatra, mamela fofona mamy eo amin'ny tontolo iainana. Amin'ireo eau de parfum rehetra, Mamela ranomanitra dimy mahafinaritra anao izahay handraisana lohataona.
2 Oscar de la Renta Rose tsara tarehy
4 Armani Emporio Miaraka Aminao Fangatahana
5 Lancome La Vie Est Belle Intensément
Nalefa tamin'ny taona 2020, ny menaka manitra vaovao Carolina Herrera dia fanontana voafetra noforonina mba hanohanana ny ady amin'ny SIDA any Afrika sy hanangonana vola ho an'ny fiantrana ao ambadik'ity fampielezan-kevitra ity: RED. Ny antony anaovany akanjo mena, io loko io dia misy amin'ny ambaratongan'ny ranomanitra rehetra. Carolina Herrera 212 VIP Rosé Red dia manolotra fofom-boninkazo masiaka izay manome fanantenana sy fahafinaretana noho ny fitambaran'ny voatabia sy voaroy ao anaty naoty ambony. Mba hamongorana ny raozy Bulgaria, ny tiramisu sy ny hazo dia mamorona hanitra manitra sy ara-nofo.
Oscar de la Renta Rose tsara tarehy
Tavoahangy rakotra voninkazo mavokely voaroy no taratasy firakofana ho an'ny ranomanitra Oscar de la Renta Bella Rosa. Manome voninahitra ny hatsaran'ny vehivavy, ireo fanamarihana mandrafitra ny fofona dia mahafaly ny saina. Tamin'ny voalohany, ny dipoavatra mavokely, ny freesia ary ny mandarin dia mifangaro amin'ny fofona manitra kely mba hitarika am-po voninkazo jasmine, rose mavokely ary faka orris. Farany, ny amber, sandalwood ary patchouli dia nipoitra tamin'ny fanamarihana ambany izay miteraka zaridaina miafina feno voninkazo.
Avy amin'izy rehetra ranomanitra vaovao izay nahita ny hazavana tamin'ity taona ity, iray ihany no afaka mitondra antsika amin'ny andro main'ny lohataona rehefa manomboka manazava ny zaridainan'i Amalfi Coast ny tara-pahazavana voalohany. Ny fofona Dolce & Gabbana Dolce Shine dia maneho ny zatovovavy rehetra manome azy ireo izay mahafinaritra sy mahafaly mampiavaka azy ireo. Izany dia tratra noho ny firaisan'ny manga mangatsiaka be ranony sy ny asidin'ny grapefruit izay niaraka tamin'ny naoty jasmine, voninkazo voasary ary fofom-boasary mamokatra menaka manitra voninkazo.
Armani Emporio Miaraka Aminao Fangatahana
Tahaka izany ny fijerin'i Armani Emporio in Love With You Freeze
Ny fofona Armani Emporio in Love With You Freeze dia mampifantoka naoty serizy marefo sy manintona eo an-tampony izay manome fo peonies malefaka rehefa mandeha ny fotoana, ary mifarana amin'ny naoty musk sy patchouli. Izany dia miteraka menaka manitra vehivavy sy vaovao izay mampihetsi-po ny fahatsapana sy ny fihetseham-po tamin'ny andro voalohany amin'ny fitiavana, raha ny fientanam-po sy ny fahasambarana no tsara indrindra. Miaraka aminy, nisy kinova lahy natomboka mba hankalazana ny firaisan'ny mpivady matanjaka.
Ny menaka manitra dia aseho amin'ny tavoahangy mahitsizoro mahavariana mampahatsiahy ny tsiky fitaratra, miaraka amin'ny fuchsia ho singa mampiavaka ny hanitra. Vita, avy eo, tsipika kely mitovy loko. Ity menaka manitra ity dia teraka ho fandraisana anjara amin'ny fahasambarana sy filaminana ho an'ny vehivavy, manaraka ny fiverenan'ny teo alohany. Manome fofona mahery sy mamy izy satria misy bergamot, voaroy ary dipoavatra mavokely eo an-doha mba hanohizany ny hanitry ny jasmine. Mifarana amin'ny hamamin'ny lavanila, iris mena ary patchouli io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » ditin-kazo manitra » Menaka manitra vaovao hitsena ny lohataona
Fomba fanamboarana boaty hazo amin'ny fomba tsotra
Ahoana ny fomba ahazoana manicure manara-penitra ao an-trano